Curtis 'Wall Street' Carroll: ရှယ်ယာတွေကို ဈေးကစားမှုကို ကျွန်တော် ထောင်ထဲတွင် သင်ယူခဲ့ပုံ - English-Video.net
Curtis "Wall Street" Carroll - Financial literacy advocate
The media calls Curtis "Wall Street" Carroll the "Oracle of San Quentin" for his stock picking prowess and ability to translate financial information into simple language for his students.
Carroll grew up in Oakland, California surrounded by poverty. In 1996, at 17 years old, he committedarobbery whereaman was killed. He turned himself in and ended up an illiterate teenager in prison witha54-to-life sentence. While in prison, the stock market captured his attention, but due to his illiteracy he couldn't learn more about it. Motivating by the lure of financial gaining, he taught himself how to read at 20-21 years old, and then he started studying the stock market. Carroll's role models changed from drug dealers and sports figures to Bill Gates and Warren Buffet. He wanted others to learn this new way of making money.
When Carroll arrived at San Quentin in 2012, he met Troy Williams, who helped him start the Financial Literacy Program. Together they created the philosophy F.E.E.L (Financial Empowerment Emotional Literacy) that teaches people to recognize how their emotions affect their financial decision, and how to separate the two.
Curtis "Wall Street" Carroll | Speaker | TED.com
Curtis 'Wall Street' Carroll: ရှယ်ယာတွေကို ဈေးကစားမှုကို ကျွန်တော် ထောင်ထဲတွင် သင်ယူခဲ့ပုံ
ဘဏ္ဍာရေးကိစ္စထဲမှာ အသုံးလုံး ကျေသူဖြစ်ရေးဟာ ကျွမ်းကျင်မှု မဟုတ်ဘဲ နေထိုင်မှု ဘဝပုံစံ တစ်မျိုးပါ။ အဲဒါကို Curtis "Wall Street" Carroll ထံမှ သင်ယူပါ။ ထောင်ထဲ နေထိုင်ခဲ့ရသူ Caroll ဟာ ဒေါ်လာရဲ့ တန်ဖိုးကို ကောင်းကောင်းကြီး သိနားလည်သူပါ။ ထောင်ကျနေခဲ့စဉ် သူဟာ သူ့ဘာသာသူ ရေးဖတ်တတ်လာအောင် နှင့် ရှယ်ယာတွေ ရောင်းဝယ်ရေး အတတ်ပညာကို သင်ယူနိုင်ခဲ့ပြီး အခုတော့ သူဟာ ရိုးရှင်းပေမယ့် ထက်မြက်တဲ့ သဝဏ်လွှာကို၊ ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံးဟာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ငွေတွေနဲ့ ပတ်သက်လာရင် ပိုပြီး ဦးနှောက်သုံးရန် လိုအပ်တာကို တင်ပြထားပါတယ်။
Curtis “Wall Street” Carroll overcame poverty, illiteracy, incarceration andalack of outside support to becomeastock investor, creator and teacher of his own financial literacy philosophy. Full bio
ကျွန်တော်ဟာ အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ်တုန်းက
ဂိမ်းတွေ ကစားတဲ့ နေရာမှာ
အဲဒီ အဆောက်အဦထဲမှ ထွက်လာတော့
လုံခြုံရေး ငနဲက ကျွန်တော့ လက်မောင်းကို
အဲဒါနဲ့ ထိပ်ကို ရောက်တော့၊
ကျောပိုးအိတ်ထဲက မတ်စေ့ ၃၀၀၀
အဲဒီလိုကျလိုက်တာနဲ့ လုံခြုံရေး အစောင့်က
and he said, "Next time you little punks
steal something you can carry."
ပြောလိုက်တာက၊ "နောက်တစ်ခါ ခိုးချင်ရင်
မိခင်ရဲ့ တာဝန်ယူမှုနဲ့ လွှတ်ပေးလိုက်ရာ၊
ဦးလေးရဲ့ ပထမဦးဆုံး စကားလုံးတွေက၊
"မင်း ဘယ်လို အဖမ်းခံရတာလဲ။"
I said, "Man, the book bag was too heavy."
He said, "Man, you weren't supposed
to take all the quarters."
"မင်းက အဲဒီအကြွေစေ့တွေ အားလုံးယူဖို့
I said, "Man, they were small.
What am I supposed to do?"
ကျွန်တော်က "အကြွေစေ့တွေ သေးလွန်းတယ်၊
အဲဒီနောက် ၁၀ မိနစ်အကြာတွင် သူဟာ ခိုးယူရန်
ဂိမ်းကစားနဲ့ နောက် တစ်နေရာကို ခေါ်သွားတယ်။
အိမ်ပြန်ဖို့ ဓာတ်ဆီဖိုးငွေ လိုနေခဲ့လို့လေ။
Oakland၊ California မှာ ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်။
ကိုယ့်ဝန်းကျင်မှာ မိသားစု၊ မိတ်ဆွေတွေနဲ့
မကြာခဏဆိုသလို ပေါင်မု့န်အတွက် တန်းစီစဉ်
စွပ်ပြုပ်ရည် ဆိုင်မှာ ညစာ စားခဲ့ရတယ်။
The big homie told me this:
ငနဲကြီး တစ်ယောက် ပြောခဲ့ဘူးတာက-
ငွေက ကမ္ဘာကြီးကို အုပ်စိုးတယ်
ဒီက လမ်းတွေပေါ်မှာ ငွေဟာ ဘုရင်ပါပဲ။
ကိုယ်က ငွေရဲ့ နောက်ကနေ လိုက်ကြည့်ရင်
it'll lead you to the bad guy
ကိုယ်ဟာ မကောင်းတဲ့ သူဆီ ဒါမှမဟုတ်
ကျွန်တော့ ပထမဦးဆုံး ရာဇဝတ်မှုကို
ကျွန်တော်ဟာ အလားအလာရှိသူ ဖြစ်တယ်လို့
ပထမ အကြိမ် ပြောခံခဲ့ရတော့
ဒေါက်တာ၊ အင်ဂျင်နီယာ ဖြစ်နိုင်တယ်
I couldn't read, write or spell.
တကယ်တော့ အဲဒါကို ကျွန်တော် ဘယ်လို
လုပ်ရနိုင်မလဲ။ အသုံးလုံး မကျေခဲ့တဲ့သူ။
ကိုယ်သွားရမယ့် လမ်းလို အစဉ်ယူဆခဲ့တယ်။
ထိုသူက သူနဲ့ပေါင်းပြီး ခိုးယူကြမယ့်
တကယ်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ခဲ့ကြတယ်။
ကျွန်တော့ မိခင်ဟာ သွေးလှူဖို့ တန်းစီး
ကလေးတွေကို ကျွေးနိုင်ဖို့ သွေးကို
ဒေါ်လာ ၄၀ နဲ့ ရောင်းနေခဲ့ရတယ်။
အပ်ထိုးရာတွေကို မြင်လို့ ရနိုင်သေးတယ်။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်ဟာ ကိုယ့်ရပ်ကွက်ကို
They didn't care about my life.
သူတို့ကလည်း ကျွန်တော့ကို ဂရုမစိုက်ခဲ့ကြပါ။
လူတိုင်းက ကိုယ်လိုချင်တာကို ရဖို့သာ
လူတိုင်း ငွေကိုချည်းပဲ လိုနေခဲ့ကြတယ်။
ရတဲ့ နည်းနဲ့ ယူခဲ့ရတာပေါ့။
ဘဏ္ဍာရေး စည်းကမ်းတွေက ကမ္ဘာကြီး
ကျွန်တော်က လူဆိုးတွေ နောက်က လိုက်ရင်းနဲ့
၎င်းရဲ့ ကျေးကျွန် ဖြစ်ခဲ့တယ်။
၁၇ နှစ်အရွယ်မှာ ကျွန်တော်ဟာ လုယက်မှုနဲ့
ထောင်ထဲမှာ ဘဏ္ဍာငွေဟာ လမ်းတွေပေါ်မှာနဲ့
စာရင် ပိုလို့ကို ဩဇာရှိတာကို နားလည်လာတယ်၊
ကျွန်တော်လည်း အဲဒီထဲ ပါချင်ခဲ့တယ်။
တစ်နေ့တွင် ကျွန်တော်ဟာ သတင်းစာထဲက
so my celly could read it to me,
ကျွန်တော်ဟာ မှားပြီး စီးပွားရေးကဏ္ဍကို
"Hey youngster, you pick stocks?"
ဒါနဲ့ ထိုလူကြီးက၊"ဟေ့ကောင်၊ မင်းက
ရှယ်ယာတွေကို ကစားတာလား?" မေးတယ်။
"အဲဒါ ဘာတွေလဲ။" မေးကြည့်တယ်။
And I said, "What's that?"
He said, "That's the place
where white folks keep all their money."
"အဲဒါက မျက်နှာဖြူတွေ ငွေထားကြတဲ့
မျှော်လင့်ချက် ရောင်ချည်လေး ပေါ်လာခဲ့တယ်၊
အဲဒီလူက ရှယ်ယာတွေ အကြောင်း အနည်းငယ်မျှသာ
ဒါပေမဲ့ အဲဒါကို ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ
ကျွန်တော်ဟာ အဖတ်၊အရေး၊ အသံထွက်
ကိုယ် စာမတတ်တာကို ဖုန်းကွယ်ရန်
ကျွန်တော် လုပ်နေကျ အရာတွေက
အခု ဝန်းကျင်ထဲမှာ အလုပ်မလုပ်တော့ပါ။
ကျွန်တော်ဟာ လှောင်အိမ်ထဲတွင်၊ သားရဲတွေ
တစ်ခါမှ မရရှိဖူးတဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်
ရွေးချယ်စရာ ဘာမှ မရှိခဲ့ပါ။
အဲဒါနဲ့ အသက် ၂၀ အရွယ်မှာ
I'd ever done in my life.
အခက်ဆုံး အရာကို ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။
စာအုပ် တစ်အုပ် ကောက်ယူလိုက်တယ်၊
ဘဝထဲက အခံရခက်ဆုံး အချိန်ကာလ ဖြစ်ခဲ့တယ်၊
ဖတ်တတ်ဖို့ သင်ယူဖို့ ကြိုးစားခဲ့တယ်၊
ကိုယ့် မိသားစုကို၊ ခင်မင်ခဲ့တဲ့ ငနဲတွေကို
အတော့ကို မလွယ် ကြမ်းတမ်းခဲ့တယ်။
အကြီးမြတ်ဆုံး ဆုလာဘ်ကို ရရှိနေခဲ့တယ်-
ကျွန်တော်ဟာ ဖတ်ဖို့ စိတ်တက်ကြွနေခဲ့လို့
လက်ထဲ ရသမျှကို ဖတ်တော့တယ်၊
သကြားလုံးထုပ်၊ အဝတ်အစား တံဆိပ်တွေ၊
လမ်းပေါ်က ဆိုင်းဘုတ်တွေ အားလုံးပါပဲ။
ကျွန်တော်ဟာ တချိန်လုံး ဖတ်နေခဲ့တယ်!
ဘယ်လိုဖတ်ရမယ်၊ ဘယ်လို စာလုံးပေါင်းရမယ်
ဆိုတာ သိပ်ကို စိတ်ဝင်စားနေခဲ့တယ်။
The homie came up, said,
"Man, what you eating?"
"မင်း စားနေတာ ဘာလဲ။" မေးတော့
I said, "C-A-N-D-Y, candy."
ငါ ကျွန်တော်က "C-A-N-D-Y, candy" ဖြေတယ်။
သူက "ငါလည်း စားချင်တယ်" ဆိုတော့
ကျွန်တော်က "N-O. No." ဖြေတယ်။
He said, "Let me get some."
I said, "N-O. No."
အဲဒီထဲကနေပြီး ကျွန်တော ရရှိခဲ့တဲ့
အဲဒီနောက် ၂၂ နှစ် အရွယ်မှာ၊
တချိန်တုန်းက ငနဲကြီး ပြောခဲ့တာကိုပါ။
အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော်ဟာ သတင်းစာထဲက
စီးပွားရေး ကဏ္ဍကို ယူကြည့်တယ်။
အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော်ဟာ အဲဒီလို
ကျွန်တော်ဟာ ရှေ့ဆက်ပြီး လုပ်ကိုင်လာတာက
ကိုယ့်ငွေကို ဘယ်လို စီမံခန့်ခွဲလျက်
ရင်းနှီးရမှာကို သူများကို သင်လာခဲ့တယ်၊
ကိုယ့် လုပ်ဆောင်ချက် အတွက် ကိုယ်က
တာဝန်ယူဖို့ လိုတာကို နားလည်လာတယ်။
ကျွန်တော်ဟာ တော်တော့ကို ရှုပ်ထွေးတဲ့
ရာဇဝတ်မှုတွေကို ကျူးလွန်သူ ဖြစ်လာတယ်၊
အဲဒါ့က ကျွန်တော် ဘဝ ဖြစ်လာခဲ့တယ်။
ကိုလုပ်ခဲ့တာကို ကိုယ်က တာဝန် ယူခဲ့ရတယ်။
ထောင်တွင်း အလုပ်အကိုင်မှ ရတဲ့ ငွေ​တွေကို
ကိုယ့်ဘဝကို စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရင်
နောက်ပိုင်း သုံးလို့ ရမယ့် ကိရိယာတွေအဖြစ်
လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲ ပြန်ဝင်တဲ့ အခါမှာ
ငွေကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့ အတွက်ပါ၊
who didn't commit crimes.
ပြစ်မှု မကျူးလွန်ခဲ့သူ အများစု
MarketWatch ရဲ့ အဆိုအဆိုင်း ဆိုရင်၊
၆၀ ရာခိုင်နှုန်း ကျော်ဆီမှာ
စုဆောင်းငွေဟာ ၁၀၀၀ ထက် နည်းပါတယ်။
Sports Illustrated ကျတော့ NBA နဲ့
NFL အားကစားသမားတွေ အထဲက
၆၀% ကျော် ဘာမှ ရစရာ မရှိကြပါ။
အိမ်ထောင်ရေး ပြဿနာ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းဟာ
ဘဏ္ဍာရေး ပြဿနာနဲ့ ဆိုင်ကြတယ်။
ဒီတော့ လူတွေဟာ တစ်သက်လုံး အလုပ်ကို
ကားတွေဝယ်၊ အဝတ်အစားဝယ်၊ အိမ်ယာ
အဲဒါနဲ့ ရသမျှလစာ အကုန် ကုန်သွားရောလား။
မရှိကြတဲ့ လူတွေက ဘယ်လိုလုပ်ပြီး
if they couldn't manage they own stuff?
ဒါကလည်း သိပ် အကောင်းစားကြီး မဟုတ်သေးပါဘူး။
အခုတော့ ကျွန်တော်ဟာ လမ်းပေါ်မှာ
တွေ့ရသူတွေအတွက် တာဝန် ရှိလာတယ်
ကျွန်တော်ဟာ ကိုယ့် အအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်
ကိုယ့်အသိုင်းအဝိုင်း ကိစ္စ စဉ်းစားလာတာကို။
ဘဏ္ဍာရေး အသုံးလုံး မကျေမှုဟာ
အဲဒါက ကျွန်တော်တို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲက
လူနည်းစုတွေနဲ့ နိမ့်တဲ့ လူတန်းစားကို
နှိပ်စက်လာခဲ့တာ မျိုးဆက်ပြီး မျိုးဆက်ပါပဲ၊
အဲဒါ့ကို ကျွန်တော်ဟာ ဒေါသထွက်ရန် လိုပါတယ်။
ကိုယ့်ကို ဒါကို မေးကြည့်ပါ-
ငွေကြေး ပေါကြွယ်လှတဲ့ အမေရိကမှာ
၅၀ ရာခိုင်နှုန်းတို့ဟာ ဘဏ္ဍာရေးကိစ္စ
များထဲမှာ အသုံးလုံး မကျေကြတာလဲ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တရားမျှတမှုကို ရယူမှု၊
အားလုံး လူတွေအများစု စီမံခန့်ခွဲနိုင်စွမ်း
မရှိကြတဲ့ ငွေရေး​ကြေးရေးနဲ့ ဆက်စပ်နေတယ်။
that most people can't manage.
အဲဒါ ကပ်ဘေးကြီးနဲ့ တူပြီး
ကျွန်တော်တို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက ဒီထက်ကို
ပိုကြီးတဲ့ အန္တရာယ် မရှိနိုင်ပါ။
ကယ်လီဖိုးနီးယား ထောင် ဦးစီးဌာနရဲ့ အဆိုအရ၊
အကျဉ်းသား ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်တို့ဟာ
ငွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပြစ်မှုတွေ အတွက်
fraud, larceny, distortion --
လိမ်လည်မှု၊ ခိုးယူမှု၊ လုပ်ကြံမှု -
ပုံမှန် အကျဉ်းသား တစ်ဦးဟာ
ကယ်လီဖိုးနီးယား ထောင်ကို ဝင်လာချိန်မှာ
ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဘာပညာရေမှ မရှိဘူး၊
တစ်နာရီကို ၃၀ ဆင့် ဝင်ငွေ ရှိမယ်၊
တစ်နှစ်လုံးတွင် ဒေါ်လာ ၈၀၀ ကျော်ပါ၊
လက်တွေ့ ဖြုန်းစရာ ဘာမှ
မရှိခဲ့ပေမဲ့ ဘာမှ မစုမိပါဘူး။
သူ့ကို လွတ်ပေးချိန်မှာ၊ ဒေါ်လာ ၂၀၀ ကို
လက်ထဲ ထည့်ပေးပြီး ​ပြောကြမှာက၊
"Hey, good luck, stay out of trouble.
Don't come back to prison."
"ဟေ့၊ မင်း ကံကောင်းပါစေ၊ ပြဿနာတွေကို
ရှောင်နေ၊ ထောင်ကို ပြန်မလာနဲ့။"
မယ်မယ်ရရ ဘယ်လိုမှ မပြင်ဆင်ခဲ့သူ
ရေရှည် စီမံကိန်း မရှိသူဟာ
what does he do ... ?
အသက်က ၆၀ ဆိုရင်ကော။
ဒါမှမဟုတ် သူ့ကို ထောင်ထဲကို ပို့ခဲ့တဲ့
ရာဇဝတ်မှု ဝန်းကျင်ကိုပဲ ပြန်သွားမလား။
သူ့ ပညာရေးကိစ္စကတော့ သူ့ဘာသာသူ
ဒီတော့ ဒီရောဂါကြီးကို ဘယ်လို ကုစားကြမလဲ။
ကျွန်တော်ဟာ အစီအစဉ် တစ်ခု
ကျနော်တို့က FEEL လို့ ခေါ်ကြတယ်၊
ပြီးတော့ ကိုယ့်ဘဏ္ဍာရေး အတွက် ထာဝရ
ကျင့်သုံးရမယ့် စည်းကမ်း လေးခုကို ပေးကြတယ်-
ငွေကို စနစ် တကျ စုဆောင်းပါ၊
ကိုယ့် နေထိုင်မှု စရိတ်ကို ထိန်းချုပ်ပါ၊
ငွေကို ထိထိရောက် ချေးယူပါ၊
ပြီးတော့ ကိုယ့် ဘဏ္ဍာငွေကို ခွဲသုံးပါ၊
အဲဒီလိုနည်းဖြင့် ငွေရဖို့ လုပ်မယ့်အစား
သင့်အတွက် ငွေကို အလုပ်ခိုင်းပါ။
ပြန်မဝင်ခင် ဒီလိုကျွမ်းကျင်မှုတွေ လိုတယ်။
You can't have full rehabilitation
ဒီလိုကျွမ်းကျင်မှု မရှိဘဲနဲ့ ကိုယ့်ဘဝကို
အပြည့်အဝ ပြန်လည်ထူထောင် မရနိုင်ပါ။
ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်တွေသာ ငွေကို ရင်းနှီး
နိုင်ကြပြီး စီမံခန့်ခွဲနိုင်ကြတယ် ဆိုတာ
အဲဒီလို ​ပြောသူတွေဟာ လိမ်ညာနေကြတာပါ။
ကိုယ့် အလုပ်ကို အများစုထက်
ခင်ဗျားတို့ ငွေဘယ်လောက် လိုအပ်သလဲ၊ ရှိသလဲ
လိုချင်သလဲ ခင်ဗျားတို့ ကိုယ်တိုင်သာ သိတယ်၊
ဒီတော့ ခင်ဗျားတို့လည်း ကျွမ်းကျင်သူပါပဲ။
ဘဏ္ဍာရေးကိစ္စ အသုံးလုံး ကျေမှု ဆိုတာ
ကျွမ်းကျင်မှု ပညာ မဟုတ်ပါဘူး။
အဲဒါဟာ ဘဝ ပုံစံပါ။
ဘဏ္ဍာရေး တည်ငြိမ်မှု ဆိုတာ စနစ်ကျတဲ့ ဘဝမှ
ထွက်လာတဲ့ ဘေးထွက် ရလဒ်ပါ။
ဘဏ္ဍာရေးကို ကျွမ်းကျင်တဲ့ အကျဉ်းသားဟာ
အခွန်ထမ်း နိုင်ငံသား ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဘဏ္ဍာရေးကို ကျွမ်းကျင်တဲ့ အခွန်ထမ်းသမားဟာ
အဲဒီလို ဆက်ပြီး မြဲနေနိုင်မှာပါ။
အဲဒါက ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်ကြတဲ့ လူတွေ၊
မိသားစု၊ မိတ်ဆွေတွေနဲ့ ရာဇဝတ်မှုနဲ့ ငွေဟာ
အကြားမှာ ပေါင်းကူး တံတားကို
So let's lose the fear and anxiety
ပြီးတော့ ခင်ဗျားတို့ ကြားလာခဲ့ကြရတဲ့
that you've been out there hearing.
အဓိပ္ပါယ် မရှိကြတဲ့ စကားလုံးတွေကို
And let's get to the heart
of what's been crippling our society
နှိပ်စက်နေတာရဲ့ ဇာတ်မြစ်ကို နားလည်ပြီး
ကိုယ့်ဘဝအတွက် မန်နေဂျာ ကောင်းဖြစ်ရေး
တာဝန်ကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ယူကြပါစို့။
And let's provideasimple
ဒီနေရာကနေပြီး လူတိုင်း နားလည်လို့ လွယ်တဲ့
သာဓက တစ်ခုကို ပေးပါရစေ
ဘဏ္ဍာရေး ကိစ္စတွေနဲ့ ခံစားချက် ကိစ္စများထဲ
Now, if you're sitting out here
ခင်ဗျားတို့ ဒီမှာ ထိုင်နေရင်း ​
"ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အဲဒါက
"Oh yeah, well, that ain't me
and I don't buy it,"
then come take my class --
အဲ့လို့ဆိုရင် ကျွန်တော့ အတန်းကို လာပါ၊
ခင်ဗျားတို့ စိတ်လှုပ်ရှားတိုင်း ငွေနဲ့
အချိန် ဘယ်လောက် တန်တယ်ဆိုတာ ပြပေးမှာပါ။
Translated by Myo Aung
Curtis 'Wall Street' Carroll: ရှယ်ယာတွေကို ဈေးကစားမှုကို ကျွန်တော် ထောင်ထဲတွင် သင်ယူခဲ့ပုံ | TED Talk | TED.com